Awoodin in la Kordhiyo Faylka. Saldhigga Faylasha lama furi karin. Khaladaadka la ogaan lahaa Faylka.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Khaladaadka la ogaan lahaa Faylka
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan "Khaladaadka laga yaabo in lagu ogaado Faylka" Khalad
Markaad isticmaaleyso Microsoft Outlook si aad u furto ama aad u waafajiso galka khad la'aanta ah (.ost) faylka, waxaad aragtaa fariinta qaladka soo socota:
Aan awoodin inuu balaariyo galka. Xirmooyinka galka lama furi karin. Khaladaadka waxaa lagu ogaan lahaa feylka xxxx.ost. Jooji dhammaan codsiyada ku shaqeeya boostada, ka dibna isticmaal Qalabka Dayactirka Sanduuqa.
aaway 'xxxx.ostwaa magaca galka khad la'aanta ah (.ost) faylka waxaa abuuray shirkadda 'Outlook' markay la shaqeyneyso sanduuqa isweydaarsiga khadka toosan. Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u laheyn faylka maadaama si toos ah loo abuuray.
Marka aad OST faylka wuxuu noqdaa mid musuqmaasuq ama dhaawacma, mana shaqeyn karo Microsoft Outlook, waxay soo sheegi doontaa qaladkan.
Si loo xaliyo qaladkan oo looga hortago luminta xogta, fadlan samee sida soo socota:
Xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsi ah ee laga yaabo inay galaan OST gudbiso.
Raadi OST faylka sababa qaladka. Iyada oo ku saleysan macluumaadka ku jira farriinta qaladka, waxaad si fudud u heli kartaa faylkaas. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Search shaqada ee Windows si aad u raadiso ka OST gudbiso.
Kabsado xogta offline ee OST gudbiso. Isbedelka OST Faylka waxaa ku jira xog qadla'aan ah, oo ay ku jiraan fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale, ee ku jira sanduuqaaga Bedelka, kuwaas oo muhiim kuu ah adiga. Si aad u soo kabsato oo aad u samatabbixiso xogtan, waa inaad isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loo baaro OST faylka, soo kabso xogta ku jirta, oo ku keydi faylka Muuqaalka PST si aad uga wada heli karto dhammaan fariimaha iyo walxaha Muuqaalka si fudud oo hufan.
Magacaabi ama tirtir asalka OST faylka dhibaatada keena.
Hagaaji qaladka. Hubso in goobaha koontada emailka ee Muuqaalka ay sax yihiin, oo Muuqaalka ayaa si sax ah ugu xirmi kara server-kaaga Exchange. Kadib restart Muuqaalka oo dir ama ku soo dir e-mayladaada sanduuqa ku-meel-gaadhka ah ee u dhigma, kaas oo u oggolaan doona Muuqaalka inuu abuuro cusub OST si toos ah u fayl garayso isla markaana ku waafajiso xogteeda sanduuqa isweydaarsiga Haddii habkani aanu shaqeynin, markaa cinwaankaaga boostada ee imika uu khaldan yahay, waa inaad tirtirtaa oo aad mid cusub abuurtaa, sida soo socota:
Soo dejiso xogta lagu soo celiyey tallaabada 3. Kadib OST Dhibaatada feylka waa la xaliyay, hayso cusub OST faylka loogu talagalay sanduuqa isweydaarsiga ee furan, ka dibna fur faylka PST ee lagu sameeyay tallaabada 3 oo leh Muuqaalka. Maaddaama ay ku jirto dhammaan xogta la soo kabsaday ee asalkaaga ah OST faylka, waad nuqulan kartaa waxyaabaha loo baahan yahay si aad u cusub OST fayl xul ah.